Ezumike Kachasị Ezumike Email Guide Infographic | Martech Zone
'Tis oge maka ezumike ahịa, na anyị email nkwenye software onye nkwado NeverBounce kere ihe ezumike ezumike email kacha ezumike n'ihi na ị na-ele ụtọ.
The Data National Retail Federation gaa n'ihu igosi na mmefu na-arị elu n'afọ a, ọkachasị n'ịntanetị ma na-agbali mbọ site na mgbalị dijitalụ. Ahịa email na-arụ ọrụ dị ukwuu, na ndị na-ere ahịa kwesịrị ịnọ n'elu na-edebe aha ha dị ọcha ma dị ọhụrụ iji kpuchido aha onye zitere ha na nnyefe ha.
Fọdụ stats na-eju anya maka oge ezumike 2016:
92% nke ndị na-azụ ezumike zụta n'ịntanetị.
The atụmatụ ịba ụba na ahịa na-abụghị ụlọ ahịa n'ihi na ezumike nke afọ a bụ 7 - 10%.
27.3% nke iwu na-agbali site na email ahia na Black Friday.
41% nke ndị na-ere ahịa n'Ịntanet zụta n'aka onye na-ere ahịa ọhụrụ.
Na mkpokọta, ọnụ ọgụgụ na-aga n'ihu na-abawanye na ohere ịntanetị, nke bụ nnukwu akụkọ maka ndị na-ere ahịa.
Ulo ahia ahia Email kariri i ghafu
Agbanyeghị Black Friday na Cyber ​​Monday bịara ma gafee, a ka nwere ọtụtụ ego ha ga-enweta na Disemba. Mkparịta ụka na-enweghị usoro mmekọrịta jikọtara ọnụ Ntuziaka ụbọchị email kacha elu maka oge ezumike, nke na-agbaji oge ọ bụla a na-enweta n'obere ego:
Nọvemba / Oge ekele Chunk
2 beforebọchị tupu Ekele
inye ekele Day
Afterbọchị Mgbe Ekele
2 afterbọchị mgbe Cyber ​​Monday
4 afterbọchị mgbe Cyber ​​Monday
Green Monday (Mọnde abụọ na Disemba ma ọ bụ Mọnde ikpeazụ ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 2 tupu Christmas)
Daybọchị 1 mgbe Green Monday
3 afterbọchị mgbe Green Monday
7 afterbọchị mgbe Green Monday
You hụla ụbọchị ndị ọzọ nwere oke ọganiihu dị elu n'oge oge ezumike?
Mee ka ozi ịntanetị gị dịkwuo mma
Izipu ozi ịntanetị gị na ụbọchị kwesịrị ekwesị bụ otu ihe; ijide n'aka na ha na-adọrọ adọrọ bụ akụkọ ọzọ.
NeverBounce na-enye ụfọdụ ọmarịcha ndụmọdụ maka “ime ozi ịntanetị gị na-ere ma na-ere”:
Gbaa mbọ hụ na ahụmahụ kachasị maka mkpanaka. Mee ka ọ bụrụ ahụmịhe ịzụ ahịa na enweghị nhịahụ maka ụdị ụlọ ahịa ọ bụla.
Nwee mmetụta nke uche n’oge ezumike a; atụla egwu ịdọpụ ụdọ obi ndị ahụ.
Email na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ozi ahụ ọ na-agbanwe agbanwe ma ị na-eji ha iji kwalite nke ọzọ?
Nkeji ọrụ n'ụzọ dị irè! Nke a dị oke egwu n'ịhụ ọkwa dị elu na ọnụego emeghe.
Oge bụ ihe niile. Gosiputa okwu mbu na nhọrọ ndi ahu ka ndi debanyere aha zuta ngwa ngwa.
Gụnye oku na-agbanwe agbanwe na omume niile na email gị. Gwa onye ọrụ ihe ị ga-eme.
Tụọ, nụchaa, megharịa. Marketingre ahịa email abaghị uru ma ọ bụrụ na ịnweghị ịtụ nsonaazụ ya iji hụ ihe na-arụ ọrụ na ihe anaghị arụ ọrụ.
Nọrọ na ndị debanyere aha gị 'Nice List
Ihe kachasị amasị anyị maka NeverBounce bụ nkwenye email ha, nke anyị na-eji n'ime maka ndị ahịa na ndị mmekọ anyị. Ha # 1 n'ọnụ maka ọ bụla ezumike email mkpọsa a oge bụ na-ị depụtara ọcha! Na ezi ihe kpatara ya.
Nọrọ na ndepụta ndị debanyere aha gị nke ọma site na imeghe akaụntụ na - akwụghị ụgwọ na NeverBounce ma na - enyocha ndepụta gị. Ndepụta dị ọcha na-egbochi spam ahụ:
Debanye maka Akaụntụ Akaụntụ Na-akwụghị Ọgwụ
Tags: 2016 email ahịaOzi ịntanetị 2016ozi ahịa emailnkwenye emailọrụ nkwenye emailezumike infographic ezumikeezumike email ahiaezumike ozi ahia ezumike ezumikeozi ịntanetị ezumike